Dawlada Hindiya & burcad badeeda Somalia oo la haystayaal is dhaafsan doona – SBC
Dawlada Hindiya & burcad badeeda Somalia oo la haystayaal is dhaafsan doona
New Delhi-Dawlada Hindiya ayaa la shaaciyey inay aqbashay hindise qabyo ah oo ku aadan inay wada xaajood rasmi ah la gashao kooxaha burcad badeeds Soomaalida, isla markaana ay ogolaato inay la haystayaal isdhaafsi la gasho.
Tani waa markii ugu horeysay oo dawlad ay ogolaato inay ku badalato dad laga haysto maxaabiista burcad badeeda looga shakisan yahay ee ay qabato, waxaana warkan shaaciyey Telefishinka NDTV ee dalka Hindiya laga leeyahay.
Inkastoo dalwada Hindiya si buuxda shaaca uga qaadin go’aanka aqbalaada inay muwaadiniinta ku badalato dhalinyarada burcad badeeda looga shakisan yahay hadana warar isa soo taraya ayaa sheegaya in dawlada Hindiya cadaadis lagu saarey sidii ay u aqbali laheyd dalabka shufto badeeda Soomaalida ee haysta muwaadiniinta Hindida kuwaasi oo kala degay markabka MV Asphalt Venture oo ay siidaayeen maalinimadii Axada ka dib markii ay ka qaateen aduun lacageed oo ka badan 3 milyan oo doolar.
8 ka mid ah shaqaalaha markabkaasi oo Hindi ahaa ayay iska sii daayeen shufto badeedu waxayse la hareen 7 kale oo Hindi ah iyagoo ku xirey siideyntooda shuruud ah in loo siidaayo saaxiibadooda ay gacanta ku hayso dawlada Hindiya.
Ciidamada badda ee dalka Hindiya ayaa ka qabqabtey xeebaha Soomaaliya dhalinyaro Soomaali ah oo lagu sheegay inay yihiin burcad badeed kuwaasi oo tiradoodu gaarayso 120 waxaana qaarkood loola dhaqmay si ka baxsan qaanuunka caalamiga ah ee maxaabiista, waxaana sawiro laga qaaday maxaabiistaasi ka muuqata iyagoo gacmaha iyo lugaha ka xiran isla markaana madaxa ama wajiga loo galiyey jawaan.
Talaabada dawlada Hindiya ay kula xaajoonayso burcad badeeda isla markaana ay ku badalanayso muwaadiniinteeda ragga ay hayso ayaa noqonayaa kii ugu horeeyey ee noociisa ah lamana oga sida uu go’aankaasi u saameyn doono hawlgalka caalamiga ah ee la dagaalanka burcad badeeda ka qawleysanaysa xeebaha Soomaaliya.
cilmi nuur says:
Apriil 18, 2011 at 11:55 am
waa salaamantahii Shaqaalaha warbaahinta SBC mida xigta maah markii ugu horeysay ee maxabiis dowlad ay ku badalato muwaadiniin u dhashay dalkaa ee waxaa ugu horeeyay Dowlada Jasiirada Comoros mahadsanidiin.